Fangatsiahana spiral tokana-Spiral Freezer-Square Technology Group Co., Ltd.
Ny freezer miendrika vazivazy miaraka amin'ny amponga tokana novokarin'ny Square Technology dia azo ampiharina amin'ny alàlan'ny famoahana haingana avy amin'ny sakafo nopotehina sy kely. Na izany aza, ireo fitaovana be vidy be dia be koa dia mihatra amin'ny vata fampangatsiahana haingana be toy ny sakafo efa namboarina, akoho iray manontolo, trondro iray sy ny sisa. Ny haavon'ny toerana infeed sy outfeed dia azo tsapain-tanana amin'ny alàlan'ny frezer-freezer milemindry mba hifanaraka amin'ny tsipika famokarana mpanjifa taloha sy aorian'izay, ary azo omena miaraka amin'ny mpampita hafatra mifanentana ihany koa.
● Ny vata fampangatsiahana spiral dia misy evaporator fahadiovana avo lenta, amin'ny alàlan'ny fomba famatsian-drano farany, izay mahatonga ny fahombiazan'ny fifanakalozana hafanana mihoatra ny 20% ambony noho ireo freezer nentim-paharazana.
●Ny vata fampangatsiahana boribory dia mampiasa endrika haingon-drivotra symmetrika sy malefaka boribory izay manatsara ny vokatry ny fifanakalozana hafanana.
●Izahay dia mitafy fehin-kibo vy tsy misy fangarony sy fehin-kibo plastika miaraka amin'ny vata fampangatsiahana arakaraka ny fepetra takiana amin'ny vokatra samihafa.
●Ny vata fampangatsiahana spiral dia miaraka amina rafitra fanaraha-maso afovoany manan-tsaina, ny detection automatique ary ny fitaovana maivana fanairana, izay mety ho an'ny mpampiasa miasa sy mitazona.
1620 mankany 5800mm
2 ka hatramin'ny 40
· Fefy voaroaka miaraka125mm / 150mm rindrina polyurethane matevina, jiro anatiny, hoditra vy tsy misy fangarony. Ftsy azo alaina fonenana nohosorana ully.
Fehin-kibo SS sokajy sakafo na fehikibo plastika modular
520 hatramin'ny 1372 mm
500 ho 4000 mm
Ny halavan'ny Outfeed
Data momba ny elektrika
Volan'ny firenena eo an-toerana
Tontonana fanaraha-maso tsy misy vy
Fanaraha-maso PLC, efijery mikasika, fiarovana Sela Mpandray Hafanana
Data momba ny vata fampangatsiahana
Tube fantsom-boaloboka vy, alim-bolan'ny aliminioma, felam-bonety miovaova, mpankafy manipy lava
-40℃ hatramin'ny -45 ℃
Mijanòna amin'ny fotoana
4 doka hatramin'ny 200 minjustable
Vokatra sy legioma vokatra